स्पाम ब्याकलिङ्कहरू कसरी छिटो छिटो हटाउन सकिन्छ?
केही वर्ष पहिले, स्प्याम एसईओ मा राम्रो व्यवहार गरे जुन धेरै राम्रो काम गरिरहेको थियो। म अतीतमा नि: शुल्क होस्ट माइक्रोस्टाइटहरू (जस्तै WordPress, Blogspot, etc) बाट धेरै लिंकहरू राख्न सक्दछ यो सम्भवतः एक पूर्ण प्रभावकारी लिङ्क निर्माण, साथसाथै समग्र एसईओ रणनीति चलाउन सक्छ। मेरा मतलब छ कि ती वेब होस्टिङहरूको एक खुला पहुँचमा उपलब्ध छ, तपाईं धेरै वेबसाइटहरू चाहानुहुन्छ जसलाई तपाईं चाहानुहुन्छ - केवल एक मात्र प्रयोजनको लागि। तपाईंको मुख्य वेबसाइट वा ब्लगमा लिङ्क लिङ्क गरीएको शब्द-धनी पाठ एंकरसँग जोडिएको छ। तर आजकल पेंगुइन अद्यावधिकको साथ, चीजहरू नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएका छन् - माइक्रोस्साइट स्प्याम लिङ्कको विषयले हामीलाई थाहा पाइरहेको छ कि यी ब्याकलिङ्कहरू कसरी छिटो र राम्रोसँग सफा गर्न कसरी बनाउने। निस्सन्देह, त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू र ब्लगहरू अझै पनि वेबमा फेला परेको छ जसका लागि यो प्रकारको पहिले नै ग्रे-ह्याट लिङ्क लिङ्क इमेज राम्रो प्रदर्शन गर्न देखिन्छ। मेरा मतलब यी वेबमास्टर्सहरू, ब्ल्याक वा साइट मालिकहरूले प्राय: एक्लोक्रिक स्प्याम लिङ्कहरू बाहिर निस्क्रिय गर्न कार्यलाई ढिलाइ गरिरहेका छन् - किनभने किनकि तिनीहरू मद्दत गर्न लागेका छन्, कम से कम क्षणका लागि।
तर म अझै पनि आग्रह गर्दछु कि तपाई अझ राम्रो नै थाहा छैन कि कसरी यी ब्याकलिङ्कहरू छिटो हटाउन सकिन्छ तर छिट्टै छिटो हटाउनका लागि तपाइँको वेबसाइट वा ब्लगमा हटाउने विचार गर्नुहोस्। यो कुरा किन यति थिच्दै छ? यदि मेरो धारणा सही छ भने, आगामी पेंगुइन अद्यावधिक यो स्प्याम लिङ्क पत्ता लगाउन पनि सिकाउन सकिन्छ। यस तरिका, विचार गर्नुहोस् कि Google सर्च इन्जिन सबै चीजहरू विरुद्ध अप्ठ्यारोसँग लड्न सबै भन्दा राम्रो गर्दैछ - यसको अर्थ यो हो कि एक दिन तपाई आफैले ठूलो समस्यामा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले पहिले नै बताए अनुसार, यो प्रकारको लिङ्क भवन अब निश्चित रूपमा Google द्वारा मुख्य वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू विरुद्धको छ। यसैले कुनै भन्नुपर्दैन कि त्यहाँ एक रैंकिंग भक्ति कमाउने सम्भावना उच्च जोखिम छ। खराब स्थितिमा सबै चीजहरू एक म्यानुअल समीक्षाको साथ पनि समाप्त हुन सक्दछ, सामान्यतया अधिक अधिक गंभीर र अक्सर अपरिवर्तनीय श्रेणीबद्ध दण्डको लागी आवेदन गर्दछ।
सबै पछि, यो केवल तपाईं निर्णय गर्नको लागि हो - आफैलाई जाँच गर्न र छोटो सूचनामा यी सम्भावित खतरनाक लिङ्कहरू हटाउन वा चीजहरू कसरी राख्ने भनेर। वैसे पनि, म केहि आधारभूत विकल्पहरू मार्फत चलाउन जाँदैछु स्प्याम पछाडि लिंकहरू कसरी छिटो पत्ता लगाउन र अन्वेषणमा बहिष्कार गर्न कसरी देखाउँदछ।
1. सबै भन्दा पहिले, Google को वेबमास्टर उपकरणहरू प्रयोग गरेर सबै भन्दा स्पष्ट अप्राकृतिक लिंक हटाउने प्रयास गर्नुहोस् वा कुनै पनि ज्ञात अनलाइन परीक्षक उपकरण जस्तै Semalt Analyzer (Semalt), ओपन साइट एक्सप्लोरर (मोज), या Majestic SEO। तथापि, तथापि, यी स्प्याम लिङ्कहरूको निश्चित भाग अनिवार्य रूपमा असूचीगत बनेको छ, र यसैले शायद पत्ता लगाउन सकिने छ।
2. अर्को, तपाईको गुगल एनालिटिक्स वेब ट्राफिक जाँच गर्नुहोस् र "रेफरल" सेक्शनको साथ अगाडि बढाउनुहोस्। यसो गर्दा, सकेसम्म धेरै डेटा निर्यात गर्नुहोस् म रेफरलहरूको सूची निरीक्षण गर्छु र शायद तपाईं निर्मल रहित होस्ट माइक्रोस्ट स्प्यामको भागमा आउन भाग्यशाली हुनुहुनेछ। तथापि, तथापि, ती सबै टाढा क्लिकहरू उत्पन्न हुने छैन, तर तीमध्ये केहीले तिनीहरूलाई पाएको हुनुपर्छ।
3 Source . सबै कुरा शुद्ध तरिकाले सफा र सफा गर्न, तपाईले पनि केहि पागल स्प्रेडसिट कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। सबै केहि सरल छ तर धेरै समय र प्रयास हुनेछ। तपाईलाई आवश्यक छ कि ज्ञात माइक्रोस्टहरु को मुख्य सूची बनाउन को लागी, सबै संभवतः खोजशब्दों संग अन्य सूची - को एक सूची मा दोश्रो को दोश्रो गर्न को लागी। अन्तिममा, सबै संदिग्ध डोमेनहरू क्रल गर्न स्क्रैपबक्स जस्तै अनलाइन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् कि तिनीहरू वास्तवमा अवस्थित हुन्छन् - र यदि तिनीहरू वास्तवमा कार्य गर्छन् भने।